अपरेशनको अर्डरले मलाई प्रोग्रामिंगको लागि कसरी तयार गर्‍यो Martech Zone
सोमबार, अक्टोबर 22, 2007 शनिबार, अक्टोबर 17, 2015 Douglas Karr
बीजगणित सधैं मेरो मनपर्ने विषय भएको छ। त्यहाँ धेरै सिद्धान्त सामेल छैन, केवल विधिहरूको एक उपकरण बक्स र अपरेसनको क्रममा समाधान गर्न। यदि तपाईं हाई स्कूलमा फर्कनुभयो भने, तपाईंले सम्झनुहुनेछ (बाट उद्धृत) Math.com):
पहिले कोष्ठक भित्र रहेको सबै अपरेशनहरू गर्नुहोस्।
अर्को, exp Expense वा Radical को साथ कुनै पनि काम गर्नुहोस्।
बाँयाबाट दाँया कार्य गर्दै, सबै गुणन र भाग गर्नुहोस्।
अन्तमा, बाँयाबाट दाँयामा काम गर्दै, सबै थप र घटाउ गर्नुहोस्।
यहाँबाट उदाहरण छ Math.com:
यो विकास को लागी लागू गर्न धेरै सरल छ।
कोष्ठक भित्रको अपरेशनहरू मेरो HTML लेआउटको लागि समान हुन्छ, साधारण HTML ढाँचामा। म एउटा खाली पृष्ठबाट सुरू गर्दछु र यसलाई खोजिरहेको छु जब सम्म यसमा सबै तत्वहरू नभए सम्म म खोज्दैछु। लचिलो प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन सुनिश्चित गर्न, म सँधै एक्सएचटीएमएल र को साथ काम गर्दछु CSS। जहाँसुकै जहाँ अभिव्यक्तिहरू छन् (उदाहरणका लागि डाटाबेस वा प्रोग्रामेटिक परिणामहरू), म कोड टिप्पणी गर्छु र डमी पाठ, छविहरू, वा वस्तुहरूमा टाइप गर्दछु।
अर्को, मँ कुनै पनि घाता .्क वा रेडिकलसँग काम गर्छु। यी मेरो प्रोग्रामेटिक वा डाटाबेस प्रकार्यहरू हुन् जसले म मेरो पूरा पृष्ठमा प्रदर्शन गर्न चाहेको रूपमा डाटा निकाल्छ, रूपान्तरण गर्दछ, र लोड गर्दछ (ETL)। म वास्तवमा त्यो क्रममा चरणहरूमा काम गर्दछु जबसम्म वास्तविक क्वेरीमा फर्म्याट नगरी सुधार गरिएको प्रदर्शनमा परिणाम दिन्छ।
अर्को गुणन वा भाग हो। यो जहाँ म मेरो कोड सरलीकृत गर्दछु। बरु एक विशाल अखण्ड लिपि भन्दा, म सार मैले कोड र फाईलहरू र वर्गहरू समावेश गर्न सक्दछु। वेब विकासको साथ, म अवश्य पनि माथिबाट तल सम्म काम गर्छु।
अन्तमा, बाँयाबाट दाँयामा काम गर्दै, सबै थप र घटाउ। यो चरण अन्तिम प्रक्रिया हो, फाराम मान्यताको अन्तिम टडबिटहरू लागू गर्दै, शैलीका अंशहरू, त्रुटि ह्यान्डलिंग, इत्यादि। फेरि, म माथि देखि तलसम्म कार्य गर्छु।
राम्रो विकास कुनै ठूलो अल्जेब्रा समस्या भन्दा बढी जटिल छैन। तपाईंसँग भेरियबल्स, इक्वेसनहरू, प्रकार्यहरू ... र उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न अपरेशनको तार्किक अर्डर छ। म धेरै ह्याकरहरू देख्छु जुन केवल 'यसलाई काममा ल्याउँदछ' तर तपाईं भेट्टाउनुहुन्छ (जस्तो कि मेरो) कि यदि तपाईं आफ्नो कार्यप्रणालीको योजना बनाउँनुहुन्न र तार्किक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्न, तपाईं आफैले आफ्नो कोडलाई बारम्बार लेख्नुहुन्छ। समस्या वा परिवर्तन आवश्यक छ।
बीजगणित सधैं मेरो लागि जिगस पजल जस्तै भएको छ। यो सँधै चुनौतीपूर्ण, रमाईलो भएको थियो, र मलाई थाहा थियो कि एक साधारण उत्तर सम्भव थियो। सबै टुक्राहरू त्यहाँ छन्, तपाईंले केवल तिनीहरूलाई फेला पार्न आवश्यक छ र तिनीहरूलाई सँगै राख्नुपर्दछ। लेखन कोड फरक छैन, तर यो अझ रमाइलो छ किनभने तपाईंको पजल आउटपुट जुन तपाईंलाई जस्तो मन लाग्छ त्यही नै छ।
म औपचारिक विकासकर्ता होइन, नता म एक महान पनि हुँ। मसँग छ; जे होस्, मैले धेरै परियोजनाहरूमा लेखेको कोडमा प्रशंसा प्राप्त भयो। मँ यो कुरामा विश्वास गर्दछु किनकि मैले पहिले प्रिक्रिप्ट ट्याग लेख्नु भन्दा पहिले धेरै योजना बनाउने, व्हाइटबोर्डि,, स्कीमा उत्खनन, आदि गर्दछु।
टैग: गणितसंचालन को क्रमकार्यक्रम
बाँदर देवताहरूले बोले र स्कट एडम्सले एक पुस्तक लेखेका छन्!
यो एक राम्रो सफा पोष्ट थियो। मैले अपरेसनको क्रमलाई विकासको जस्तो अमूर्त कुनै चीजमा लागू गर्न सोचेको थिएन, तर एकचोटि तपाई यो सोच्नुहुन्छ भने, तपाईले देख्नु भयो कि ती दुबै एकै तरीकाले अमूर्त छन्। मैले यसलाई बुकमार्क गर्नुपर्नेछ र यसलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। ;]
धन्यवाद स्टीफन! म अहिले काममा प्रमुख प्रोजेक्टमा काम गर्दैछु जुन बहु तालिकाहरू र धेरै पृष्ठहरू धेरै तार्किक क्रममा फैलिएको छ (सबै एक पृष्ठ एजेक्सको उपयोग गरेर जोडिएको थियो) र मैले ध्यान दिएँ कि म कस्तो सावधान रहें र यस बारे लेख्ने निर्णय गरें।